स्टार स्पोर्टस साँगितिक समूहद्वारा डि.जे. नाइट आयोजना – Swadesh Online
स्वदेश न्यूज डेस्क — १२ पुष, २०७५0comment
माडी नगरपालिका वडा नं. ४ ले वडास्तरीय सार्बजनिक सुनुवाई आयोजना गरिएको छ । भोलि शुक्रबार बिहान ११ बजे वडा कार्यालय, सिधुवामा आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई तथा समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको वडाध्यक्ष चन्द्रदीप महतोले स्वदेश एफ.एम.लाई जनाउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागी हुन वडा कार्यालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
यसैबिच, पर्यटकीय गन्तव्य माडीको पर्यटन विकासका लागि प्रचारात्मक अभियानको नारासहित बरुवा बजारको स्टार स्पोर्टस साँगितिक समूहले डि.जे. नाइट आयोजना गरेको छ । डि.जे. मनसुनको प्रस्तुती रहने सो कार्यक्रम आउँदो अंग्रेजी नयाँ बर्षको पूर्वरात्री अर्थात डिसेम्बर ३१ तरिख पर्ने पौष १६ गते साँझ ७ बजेबाट सुरुवात हुने क्लबले जनाएको छ । स्टार खेल मैदानमा सशुल्क रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएकी पञ्चमाया तामाङको शव उठ्यो
दलित हक अधिकार सम्बन्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम ८ नं.वडा कार्यालयमा सम्पन्न